Qaraxyo lala-beegsanayey Masajidka xaramka barakeysan ee Maka. – Saraar Media
Home›All English News›Asia›Qaraxyo lala-beegsanayey Masajidka xaramka barakeysan ee Maka.
Subaxnimadii Jimcaha ayaa Qaraxyo waaweyn oo tiraba labo gaadhaya, oo lala beegsanayey masaajidka weyn ee Xajka ee Maka, ayaa kashifmay, kadib markii ciidanka sirdoonka Sacuudigu, kuguuleysteen, iney gacanta kusoo dhigaan shaqsiyaad maleegayey qaraxyada ay labeegsanayaan dhismaha masaajidka ku yaala Xashka barakeysan ee magaalada Maka,
#Saudi Interior Ministry: 5 members of terror cell related to foiled plot against Grand Mosque in Mecca arrested, including a woman. https://t.co/6VpILyx5cS
— Fahad Nazer (@fanazer) June 23, 2017
Sidaasna waxaa sheegay, wasiirka Arimaha Gudaha ee Saudi Arabian , maruu u waramayey muuqbaahiyayaasha Al Arabiya TV iyo state television Al-Ekhbariya Sida ay sheegayaan wararka xogogaalka, qorshaha qaraxyadan ayaa waxaa wadey shaqsiyaad kamida sadex urur oo argagixiso ah, oo kajira gudaha magaalada Maka . Mecca iyo magaalada Jeddah, siduu sheegayo muuqbaahiyaha dalka Sacudiga,
Ciidamada amaanka ee sacuudiga ayaa hawlgaladan ay kusoo qabqabteen Argagixisada kafuliyey Degmooyinka Mecca’s Assila iyo Ajyad al-Masafi. Sida uu sheegayo Mansour al-Turki oo kamid ah degaanka Aiyad, iney qaarkamida ku dhuumanayeen meel aan sidaa uga siifogeyn gurigiisa isla markaana, ay diideen iney lahadlaan ciidamada amaanka, kadibna, ay bilaabeen iney isku difaacaan rasaas ay ooda uga aadeen ciidamadii amaanka, halkaas oo midkamida Argagixisadu uu naftiisa isku qarxiyey, kadibna ay qaraxaas kudhaawacmeen lix rayida iyo shan kamida ciidamada Amaanka. Iyadoo ay jiraan dad ay kamid tahay haweeney oo lasheegayo in xabsiga loo taxaabay isla goobtaas,